कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा (अन्तरवार्ता)::Online News Portal from State No. 4
कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा (अन्तरवार्ता)
गल्कोट क्षेत्रको मुटु मानिने हटिया बजार कुनै बेला फोहोरका थुप्रोले दुर्गन्धित अवस्थामा रहेको थियो । जनप्रतिनिधि नभएको र कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानिय तहले बेवास्ता गरेका कारण फोहोरको थुप्रो बनेको हटिया बजार अहिले निकै सुन्दर देखीन थालेको छ । जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि वडा अध्यक्ष विरजंग भण्डारीले आफ्नो प्रमुख कामको रुपमा गल्कोट नगरपालिकाको वडा नं. ३ हटियाको फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएकाले बजारको फोहोर व्यवस्थापन भएको हो । २०७४ साल बैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार चित्र साहनीलाई हराउँदै ९ सय १० मत ल्याएर वडा अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएका भण्डारीले एक बर्षको अबधिमा गरेका काम र हुन नसकेका कामको बिषयमा सहकर्मी तारानाथ आचार्यले गरेको छोटो कुराकानी ।
वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुदो रहेछ ?
–वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न निकै कठिन रहेछ । एकातर्फ भौगोलिक बिकटता, नमिलेको भू–भागमा सबै क्षेत्रका नागरिकको चित्त बुझ्ने हिसाबले काम गर्नु नै प¥यो । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिसँग जनताका आकांक्षाहरु धेरै छन् । भन्दाभन्दै उनीहरुका काम हुनैपर्छ भन्ने छ । विकासका काम राता–रात हुनुपर्छ भन्ने सोच जनतामा छ । सोही अनुसार काम गर्न स्रोत साधनको अभाव छ । यि विविध कारणले वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न निकै कठिन हुँदो रहेछ ।
वडाध्यक्ष भएपछि यहाँका जनताले महशुस गर्ने गरी के–के काम गर्नुभयो ?
–लामो समय संक्रमणमा रहेका स्थानिय निकायहरु परिमार्जन भएर स्थानिय तहको रुपमा आए । स्थानिय तहमा हामी निर्वाचित भए यता धेरै कामहरु भएका छन् । जनताले महसुस गर्ने र हामीले पनि सम्झन लायक केही काम भएका छन् । हटियाको लमहीमा खानेपानीको चरम समस्या थियो, यो समस्यालाई हामीले समाधान गरेका छौं । खानेपानीको योजना निर्माणमार्फत साविकको १ नम्बर वडाका ६० घरले खानेपानी पाएका छन् । अर्को कुरा हटिया बजारको फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाईको काम निकै महत्वपुर्ण कामको रुपमा हामीले लिएका छौं । साविकको गाविसका सबै वडा र हालका वडाका केन्द्रहरुलाई जोड्ने गरी लिङ्करोड निर्माणको काम हामीले गरेका छौं । पर्यटनको सम्भाव्यता खोजीका क्रममा सह्रश्रधारामा क्यानोनिङको सफल परिक्षण भएको छ । यसको अर्थ हामीले हाम्रो वडाको विकासको लागि क्यानोनिङलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । वडा कार्यालयका अधिकांश सडकको स्तरोन्नती, केही ठाउँहरुमा नाली निर्माणको काम भएका छन् । बिपन्न परिवारलाई खरको छाना बिस्थापन गर्नका लागि हामीले जस्तापाता वितरण गरेका छौं । यो पटक १० परिवारले वडा कार्यालयको सहयोगमा जस्तापाताले आफ्नो घर छाएका छन् ।
वडा कार्यालय नियमीत नखुल्ने र सचिव नभेटिने समस्या छ भन्छन नि ?
–अहिले त्यो समस्या छैन् । म नियमित वडा कार्यालयमा नै छु । सचिव ज्यु पनि नियमीत उपस्थित भएर जनताका काम गरिरहनु भएको छ । पहिले त्यो समस्या थियो होला तर हामी आएपछि यो समस्या छैन् ।
–नगरपरिषदमा हामीले वडाबाट ८० वटा योजना लिएर गएका थियौं । सबै योजना पास हुने कुरा पनि भएन् । केही योजनाहरु निकै बढीनै महत्वकांक्षी योजनाहरु लगिएछ, त्यसैले ति सबै योजनाको काम गर्न सकिएन । एक घर एक सहकारी सदस्यको योजना थियो त्यसमा । हामी पुग्न सकेनौं । हामीले अघि सारेको लिंकरोड बनाउने काम योजना परेर सम्पन्न समेत भैसकेको छ । बजारमा ढल निकास र सरसफाईको काम भैरहेको छ । पर्यटनको विकासको लागि क्यानोनिङको सम्भाव्यता अध्ययन र परिक्षण गर्ने काम भएको छ । परिक्षण सफल भएकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न आगामी योजनामा हामीले प्राथमीकतामा राख्छौं । गौदी खोलाले निकै दुःख दिएको थियो । तटबन्ध निर्माणका लागि हामीले बनाएको योजना पास भएर काम सम्पन्न भएको छ । रजरादेखी निलुवासम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएर ७ लाख बराबरको काम भएको छ । बाँकी पदमार्गको लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गछौं । कवर्ड हल बनाउने योजना पनि हाम्रो थियो र बाँकी छ । खानेपानीको समस्या भएका क्षेत्रमा खानेपानी योजना निर्माणको योजना थियो जुन काम सम्पन्न भएर उपभोक्ताले पानी पाएका छन् । अन्य सानातिना धेरै कामहरु भएका छन् ।
–सबै सडक पक्कि त कसरी बन्लान र खै । बजेट झन्भन्दा झन् घट्दै आईरहेको छ । स्थानिय स्रोत केही छैन् । बाटाृको स्तरोन्नती गरेर गाडी चल्ने बनाउनकै लागि लाखौं खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । पिच त भन्न सकिन्न मेरो कार्यकारमा हिलाम्मे हुने सडकहरुमा नालीको निर्माण गरेर सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने योजना छ । केही सडकहरु ग्राभेल गर्ने योजनामा म छु । स्रोत नभएका कारण तत्कालै पक्कि बनाउन सम्भव छैन् तर बिस्तारै आम जनताको मागको आधारमा बजेको व्यवस्थापन गरेर अर्को कार्यकालका लागि आउने साथीलाई पक्कि सडक बनाउन आवस्यक पुर्वाधार निर्माण गरेर छोड्ने योजना छ ।
–हाम्रो वडा कृषि उत्पादन र पर्यटनको लागि योग्य छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । त्यसैले कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि प्रणाली अपनाएर उत्पादनमुखी बनाउने योजना छ । व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्ने, कृषि कर्म गर्ने पंक्षीपालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुदान उपलव्ध गराएर कृषिजन्य बस्तुको निर्यात हुने गरी उत्पादन गर्ने योजना हाम्रो छ । अर्को कुरा पर्यटनमा हामीसँग प्रसस्त सम्भावनाहरु छन् । क्यानोनिङको सफल परिक्षण भएको छ । अब त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन पहल गछौं । निलुवा सम्मको पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटकलाई त्यहाँ पुग्ने वातावरण सिर्जना गछौं । पुर्णकोटमा रहेको वनभोज स्थललाई विकास गर्ने काम भएको छ । आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरेर वनभोजका लागि आम मानिसहरु त्यहाँ पुग्नु पर्छ भन्ने वातावरण बनाउँछौं । जसका कारण पर्यटको विकासमा टेवा पुग्ने छ ।
–हामी जनताका प्रतिनिधि हौं त्यसैले जनताको काम गर्नैपर्ने हुन्छ । जनताको काम गर्ने सवालमा कुनैपनि बहानामा सम्झौता नगर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । हामिलाई आफ्नो बिचार राख्ने र वडामा भए गरेका कामको विषयमा वडाबासीलाई जानकारी गराउने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धन्यवाद । हामीबाट कहींकतै कमजोरीहरु भएभने खबरदारी गर्ने क्षेत्रमा यहाँहरु हुनुहुन्छ । रचनात्मक खबरदारीको हामी सधैं प्रतिक्षामा रहने छौं । अवसरका लागि तपाईं र तपाईको सञ्चारमाध्यामलाई धन्यवाद ।